Khayaamooyinka internet oo cirka isku shareeray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen
Warar iyo Barnaamijyo Af Soomali ah
Khayaamooyinka internet oo cirka isku shareeray
La daabacay torsdag 11 juli 2013 kl 10.13
''Cidna ha u horumarin wax lacag ah marka aad khadka wax ka iibsaneysid''
(6:30 min) (6:30 min)
Sawirle: Fredrik Sandberg/Scanpix.
Falalka khayaamo oo internet ka dhaca ayaa sannadihii dambe cirka isku shareeray. Sannadkaan oo qura waxay dacwooyinka boliiska loo gdubiyey kor dhaafeen boqolkiiba soddon. Boliisku wuxuu sheegay in maalin walba qabtaan ilaa 69 dacwo. Kororkaasna waxaa loo aaneynayaa in dadka dhagarta ka gala internet ay si habeysan isu urursadeen.
Habkii hore oo lagu magacaabi jirey Warqadaha Nayjeeriya waxaa hadda beddeley hab khayaamo oo ka casrisan oo ay dadka badankood ku adagtahay in ay kala ogaadaan wixii khayaamo ah iyo wixii daacad ah. Sidaas awgeed ayey khayaamooyinka internet aad ugu soo kordheen. Maanta waxay khayaamooyinkaasi noqdeen falalka dembi ee dalka ka dhaca.
Sannadkaan shantii bilood oo ugu horreysey waxaa boliiska soo gaaray dacwooyin ama ashtakooyin gaaraya 10355 oo ku saabsan khayaamooyinka internet. Sidaasna waxaa lagu muujiyey tirakoob ay soo saartay hay’adda ka hortagga dembiyada oo loo soo gaabiyo Brå. Anders Ahlqvist oo ah sarkaal waaxda boliiska u qaabbilsan dembiyada internet ayaa arrintaan ka yiri:
- Hadda waxay la isticmaalaa farsamo casri ah oo fududeysa in la qariyo habka loo shaqeeyo iyo sida lacagaha loo qariyo. Laakiin ujeeddada la leeyihiin waa sidii hore oo waa in dadka lacag laga khayaamo.
Khayaamooyinkaani waxay ku dhisan yihiin hab loo yaqaan ”social engineering”, oo micnehiisu yahay in la isugu ekeysiiyo shirkad qofka la khayaamayaa xiriir la leeyahay ama qof saaxiib ah oo sidaas lagu la wareego warbixinaha qofka iyo koontadiisa. Kadib warbixinihii la soo ururiyey ayaa lacagaha koontada looga la baxaa.
Haddii lacagahaas loo wareejiyo dalal kale, kolkaas wuxuu boliiska xiriir la sameeyaa boliiska dalalkaas. Inta ay ka soo jawaabayaanna waqti ayey qaadataa. Kolkaa waxaa dhici kara in lacagahaas durbadiiba loo wareejiyo dalal kale oo uusan boliisku dabagal ku samayn karin. Anders Ahlqvist oo arrintaan ka hadlayna wuxuu yiri:
- Aad ayey u adag tahay in dembiyadaan loo xalliyo habka loo xalliyo dembiyada caadiga ah. Marka la eego dembiyada internet badankood, waxaa halkaa nooga muuqda in si fudud ay dad lacago badan u khayaamaan. Habka ugu wanaagsanaan lahaana waa in dadka lagu wacyigeliyaa khayaamooyinkaan si looga hortago.
Waxaa kaloo jira dad badan oo aan ku dhiirrran karin in ay boliiska la xiriiraan kolka la khayaamo, maadaama ay qudhoodu ku hawllan yihiin falal dembi ah iyo ceeb ku ah qofka shakhsiyaddiisa. Tusaale haddii qofka la khayaamay uu iibsaday caarka kanaalada telefishanka oo sharci-darro ah ama uu lacag ka bixiyo in uu internet ku daawado naag qaawan oo u cayaareysa.
Tiirka saxaafaddeenna waa aaminaad iyo dhexdhexaad-nimo. Idaacadda Sweden waa mid ka madax-bannaan siyaasadda, diinta, dhaqaalaha, danaha howlaha guud iyo kuwa gaarka.
Ku akhriso warbixin dheeraad ah habka aannu u shaqeeyno (afka iswiidhishka).
Ku saabsan Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen
Kala soco barnaamijka halkan